Ny terminal Ubuntu Touch dia ho fampiharana mifandrohy | Ubunlog
Araka ny nambara omaly, Terminal, ny terminal Ubuntu Touch kely dia hiova tsy ho ela ho lasa fampiharana mifangaro. Midika izany fa hiova be ny terminal Ubuntu Phone hahafahany miasa bebe kokoa ary ilaina kokoa amin'ny mpampiasa.
Ny fampiharana fototra ny tetikasa, iray amin'ireo efatra efa naseho volana maro lasa izay ary avy amina mpampiasa maro no namorona sy nampifanaraka ny fampiharana azy ireo, hiova be izany amin'ny alàlan'ny fanampiana asa vaovao toy ny rakibolana na ny fahaizana mamily na amin'ny takelaka na finday.
Amin'izao fotoana izao ny fampiharana Ubuntu manan-danja indrindra dia namboarina tamin'ny fomba natolotra ho an'ny Ubuntu Touch, zavatra somary sarotra ihany nefa tratra ihany tamin'ny farany. Ankehitriny, ny tsangambato vaovao amin'ilay tetikasa dia ny hampiavaka ny terminal ho an'ny sehatra rehetra, izany hoe hatao ny Terminal dia Convergent.
Ny terminal vaovao dia mila ny hevitry ny mpampiasa rehetra mba hiasa
Tena hahaliana ny mpampiasa izany ary ho afaka hanatsara kokoa ny finday Ubuntu raha azo atao satria ny script, ny application sns ... dia azo tanterahina. Zavatra tsy olana satria ny Terminal dia hiasa bebe kokoa amin'ny mihena efijery. Araka izany, antenaina fa tsy ny horonam-boky na ny rakibolana ihany no ampidirina fa afaka mizara ny varavarankely ihany koa isika ary manao ilay fampiharana ho ampahany iray amin'ny efijery ihany. Hosedraina koa izany ny famolavolana sy ny kanto ny fampiharana dia mijanona ho marina amin'ny sehatra izay mandeha amin'izao fotoana izao, na amin'ny kanto finday na birao.
Na izany aza, ny zavatra mahaliana indrindra dia ny fiasan'ny fampiharana amin'ireo rafitra miasa hafa noho ny Ubuntu, izany hoe Windows. Tsy fantatray raha hitohy amin'ny Windows 10 io fampifanarahana io fa ny zava-drehetra dia manondro izany Ubuntu bash dia ho fampiharana manerantany, mitovy amin'ity tsangambato vaovao ity ao anatin'ny tetikasa. Na izany na tsy izany dia toa mandroso sy be lazaina ny Ubuntu Touch Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Touch terminal dia ho fampiharana mifangaro
Ny ekipa Lubuntu dia manomboka ny fifindra-monina mankany LXQt